mairie-antananarivo – Varavarana misokatra teny amin’ ny boriboritany fahaenina
Varavarana misokatra teny amin’ ny boriboritany fahaenina
auteur 16 jona 2017 Commentaires fermés
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy anio faha 16 Jona 2017 ny varavarana misokatra karakarain’ny Boriboritany fahaenina. Tonga nanome voninahitra ny hetsika Atoa RAZAFIMAHEFA Heriniaina, Sekretera Jeneralin’ny Fiadidina ny tanànan’Antananarivo sy ireo Delegen’ny Boriboritany dimy ary ireo Tale isan- tsokajina eo anivon’ny Kaominina.
Aharitra roa andro ny hetsika ary Tanjona ny hampafantatra ireo vahoaka eny ifotony ny fomba fiasa sy fitantanana eo anivon’ny Boriboritany, ny hampafantatra azy amin’ny lafiny rehetra amin’ireo Kaominina manodidina indrindra fa ireo zavatra mampiavaka azy. Olona manodidina ny efatra alina (40.000) eo ho eo no kasaina ho tonga hitsidika ity hetsika ity.
Natomboka tamin’ny fitsidihana ireo trano eva isan- karazany ny hetsika izay ahitana ireo tolotra omen’ny Boriboritany fahaenina sy ireo mpiray ombon’antoka ary ireo mpiara- miasa akaiky. Trano eva 17 isa no afaka tsidihana eny an- toerana izay ahitana: ny mikasika ny Boriboritany fahaenina manokana, ny CENI ( Comité Electoral National Indépendant), ny OTIV TANA, ny TOP RESEAU, ny DGI ( Direction Générale de l’Impôt), ny Orange Madagascar, ny Trano eva maneho ireo fotodrafitr’asa efa misy ary mila fanamboarana ao anatin’ireo Fokontany 31, ny Sapeur Pompier, ny GRC (Gestion de Risque et Catastrophe), ny IMV ( Projet AULNA : Agriculture Urbaine Low Space No Space à Antananarivo), ny AMETIS (Agence Malgache d’Edition des Titres et Timbres Sécurisés), ny Kopak’Ambohimanarina( ahitana ireo mpampiady akoho lahy miaraka amin’ireo arbitra manara- penitra), ny FIMPIA ( Fiombonan’ny Mpikabary Antehiroka), ny ZAMI ( Zanak’ Ambohimanarina Miaradia), ny AUE ( Association des Usagers d’ Eau)Ambohimanarina, ny YMCA ary ny RF2 (Rafitra Fidiovana sy Fanadiovana).
Mifandrindra amin’ ireo rehetra ireo ny fifaninana ara- panatanjahantena samihafa toy ny Basket Ball ho an’ny sokajy lahy sy vavy, ny fifaninana Tsikonina ho an’ny ankizy, ny fifaninana hatsaram-bika sy hatsaran- tarehy. Ho an’ny Sabotsy 17 jona amin’ny 07 ora maraina kosa dia hisy ny fifaninana hazakazaka miainga eny Ambodivonkely hatreny Anosisoa misy ny Boriboritany fahaenina. Hanolotra loka ho an’ireo telo voalohany kosa ny Orange Madagascar izay mpiara- miasa akaiky amin’ny Boriboritany sady mpanohana ofisialy ny hetsika. Nisy ihany koa fanolorana koveta ho an’ireo mpanasa lamba eny amlin’ny Fokontany araka ny fampanantenana nomen-dRamatoa Ben’ny tanàna tamin’ny fandalovany teny an- toerana.
Araka ny nambaran’Atoa Sekretera Jeneralin’ny Fiadidina ny Kaominina dia ilaina ny hetsika toy izao mba tsy aha tompon- trano miono ny vahoaka ary tokony halain’ny Boriboritany hafa tahaka. Ka miantso ireo mponina ny tenany misolo tena ny Ben’ny tanàna mba ho avy hitsidika ny hetsika mba hanamorana ny fahafantarana ireo tolotra sy asa iandreketan’ny Kaominina.